🥇 ▷ Castle Crashers Remastered wuxuu horey u leeyahay taariikhda sii deynta ee PlayStation 4 ✅
Castle Crashers Remastered wuxuu horey u leeyahay taariikhda sii deynta ee PlayStation 4
Dhowr bilood ka hor Burburkii Qalcadda waxay bixisay calaamadaha nolosha kadib in kabadan 10 sano tan iyo markii ay asalka u aheyd, waxayna u weecaneysay dhanka cusub, isku darka ‘Nintendo’ dib u habayn waxa aanan ogeyn waxay aheyd in saacado kadib la soo bandhigi doono akoonka rasmiga ah ee Twitter-ka laga soo bilaabo The Behemoth, daraasad kadib Burburkii Qalcadda Soo gudbinta dib u cusboonaysiinta ayaa ugu dambeyntii gaari doonta Nintendo Switch iyo PlayStation 4 sanadkan, iyo usbuucyo ka hor waxaan awoodnay inaan taariikhda la galno nooca loo yaqaan ‘Switch’, kaasoo imaan doona dhowr maalmood, Sebtember 17, tegitaanka nooca loo yaqaan “PlayStation 4 version”, weli waa wax hore u dhacday oo la yaab ku noqotey dad badan, ma sugi doonno inta aan ka baqeynay.
Sidii aan faallo ka bixinay, Burburkii Qalcadda waxay gaari doontaa Switch labo maalmood gudahood, iyo si sax ah, sida ay isu sheegaan Behemoth wuxuu ku qoray bartiisa, taasi waxay noqon doontaa taariikhda lagu sii daayo nooca ‘PlayStation 4’ ee Waqooyiga Ameerika, Sebtember 17. Si kastaba ha noqotee Europe, waa inaan sugnaa, laakiin ha argagixin, maxaa yeelay waxay imaan doontaa laba maalmood ka dib, 19-kii bishaan. Sidan, maalmo gudahood waxaan lahaan doonaa labada nooc ee cinwaanka Galbeedka iyadoo loo sii marayo qaybinta dijitaalka ah. Waxaan kaaga tageynaa sawirka muujinaya wax walba.
Nooca PlayStation 4 ayaa la filayay mar dambe, sida soo saareyaashu ay u sharraxeen dhowr toddobaad ka hor in «Caqabadaha qaar ay qaateen waqti ka dheer sidii la filayay; Xaqiiqdii, nooca ciyaarta ee PlayStation 4 wali wuxuu ku jiraa nidaamka ansaxinta kama dambeysta ah, sidaa darteed wali ma xaqiijinno taariikhda siideynta saxda ah «. Laakiin sida aan aragno, wax walba waa inay ka fiicnaadeen sidii ay ku qiyaaseen labadoodaba noocba waa ku dhow yihiin. Waad ka hubin kartaa macluumaadka lagu adeegsaday horudhaca xiriiriyaha soo socda.
Horay ayey u jirtay taariikhda sii deynta Castle Crashers Remastered oo ku yaal Nintendo Switch
Dhowr bilood ka hor Castle Crashers wuxuu bixiyay astaamaha nolosha ka dib in kabadan toban sano tan iyo meeshii ay ka soo jeedey asalka, wuxuuna ku dhaqaaqay isagoo kusocda goob cusub, isku-dhafka Nintendo oo leh dib u dhis. Waxa aanan ogeyn waxay aheyd…
Castle Crashers Remastered wuxuu horey u leeyahay taariikhda sii deynta ee PlayStation 4 Rubén Aido